3 /4Batwing အင်္ကျီလက် Plus အား Size ကို Long ကကန်း - Buddhatrends
3 /4Batwing အင်္ကျီလက် Plus အား Size ကို Long ကကန်း
$46.20 $77.00 သငျသညျ (40% Save$30.80)
အပြာရောင် / L ကို အပြာရောင် / XL အပြာရောင် / XXL အပြာရောင် / XXXL အပြာရောင် / 4XL အပြာရောင် / 5XL အစိမ်းရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / XL အစိမ်းရောင် / XXL အစိမ်းရောင် / XXXL အစိမ်းရောင် / 4XL အစိမ်းရောင် / 5XL အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL အဖြူ / XXL အဖြူ / XXXL အဖြူ / 4XL အဖြူ / 5XL အနီရောင် / L ကို အနီရောင် / XL အနီရောင် / XXL အနီရောင် / XXXL အနီရောင် / 4XL အနီရောင် / 5XL Black က / L ကို Black က / XL Black က / XXL Black က / XXXL Black က / 4XL Black က / 5XL
အမြတ်ဆုံးဝါဂွမ်းရောစပ်နေဖန်ဆင်းတော်, အ3/4Batwing အင်္ကျီလက်ရှည်ကန်းသည်သင်၏အသားအရေရဲ့အရောင် accentuates တဲ့အစိုင်အခဲပုံစံနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏စိတ်ကူးယဉ်ဒီဇိုင်းကစတိုင်အမြိုးသမီးမြားကိုအထူးအခါသမယတွင်, ဤလှပသောအင်္ကျီကိုကျောက်ရန်အဘို့အထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။
အို *** ဇ
ဒါဟာအကြီးကြည့်ရှုပါတယ်။ ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်မှု။ ငါသည်ဤရောင်းချသူအကြံပြု
တစ်ဦးက *** t ကို
စူပါထိပ်တန်း taille parfaite ... ne pas ချီတုံချတုံတစ်တပ်မှူး
M က *** တစ်ဦး
ТОВАРПРИНЁСКУРЬЕР။ ПЛАТЬЕСООТВЕТСТВУЕТОПИСАНИЮ။ ПОЧИТАЛАОТЗЫВЫ, ПЕРЕСТРАХОВАЛАСЬСРАЗМЕРОМ။ ОГ - 110, МОЖНОБЫЛОЗАКАЗАТЬХХI။ ПЛАТЬЕПОГЛАЖУ, ВЫШЛЮФОТОГРАФИИ။ РЕКОМЕНДУЮТОВАР, ПРОДАВЦАИМАГАЗИН။
စားဆင်ယင်နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်။ အရောင်, အရွယ်အစား & ပစ္စည်းကြည့်ဖို့ဂရိတ်ဇယား & ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာပိုမိုပြင်ဆင်ရမည်။
ထုတ်ကုန်ကောင်းတဲ့နှင့်ပစ္စည်းလည်း ....... ကိုယ်ကကြိုက်တယ်
06.03.18 заказала, 28.03.18 получилатоварнапочтевМоскве။ Платьеоченьклёвое, полностьюсоответствуетописанию, естькармашки။ 173-175, ОГ 98, ОТ 80, ОБ 103 ростТканьчем-тонапоминаеттонкийлен, будетлилинятьпристиркенезнаю, лучшенаверноерукамистирать) На, вес 73 взяларазмерအယ်လ်Селовсеотлично, свободно, какя илюблю, нотакиевещивобтягиненосят) ။ Платьелёгкое, налетосамоето။ Честно, незнаюотслеживаетсялитрекномер, непроверяла, спродавцомтоженеобщалась။ Вобщеммыскотомплатьеоценили, любителямэтникиточнопонравитсяТоваррекомендую
S က *** မီတာ
J ကို *** ဌ
im အမေရိကန်အရွယ်အစား 10 နှင့် 3XL နေဆဲအိတ်နှင့်တူသောနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ဖြစ်ခြင်းစဉ်ဿုံကိုက်ညီ။ အဆိုပါပစ္စည်းကိုဆန့်မထားဘူး။
N ကို *** တစ်ဦး
Наширинуплеч 44 иобъёмгруди 100 - XL селидеально !!! Аостальныепараметрынеимеютзначения, подюбкойможнослонаспрятать))) Платьекакнакартинке, цветтожесоответствует။ хб။ Заказывайте, толькосразмеромнепрогадайте။
Y က *** ဦး
ကို item ဿုံဖော်ပြချက်ကိုက်ညီ။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်လိုက်လာ၏။ အရည်အသွေးကောင်း။ ပထမဦးဆုံးကကိုလျှော်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့တစ်ဦးအပိုဆောင်းတုံ့ပြန်ချက်ချန်ထားမည်။ ခြုံငုံကျေနပ်မှုယခုအချိန်အထိ
H ကို *** ဈ
သငျသညျကြှနျုပျသကှကျတယ်ရောင်းချသူကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တကယ်ကိုလှပသော ။ ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ကိုချစ်။ အစာရှောင်ခြင်းတင်ပို့။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။ ☆☆☆☆☆။ ပိုပြီးဆိုင်ဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်
S က *** E နဲ့
un peu ပေါင်း Que sur la ဓာတ်ပုံ je l'ai courte lavée et repassée elle est parfaite Livraison အစွန်းရောက် Rapid
D *** ဇ
ဒါကတကယ့်ကောင်းတဲ့စားဆင်ယင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထည်အလိပ်ပူနွေးသောရာသီဥတုနှင့်အကောင်းတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးအတွက်လုံလောက်သောအလင်းဖြစ်၏။ အရောင်စစ်မှန်သောအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်ကအရမ်းဖြစ်လာနေသည်။ ကျွန်မအကြံပြုလိမ့်မယ်။
T က *** မီတာ
ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဘဲနေ၏။ nightgown ဘို့သမီးတို့အားပေး၏။
ငါ *** E နဲ့
စူပါ !!!!!!!!!! ငါသည်ဤရောင်းချသူထံမှအမိန့်မည်! Thank you!
: D *** r
ဦး *** ဦး
доставкаоченьбыстрая, 12 дней။ цветчутьтусклее, чемнакртинке, ноядопускаюразницуреальнойтканиикартинки။ материалнатуральныйхлопок, размеруселоидеальноမူ။ Платьепришлогрязное, какбудтовкакой-торылеиликлею, ноэтоотстирается, небеда။ кое-гдеторчалинитки, нонекритично။ всешвыровные။ вцелом, затакиеденьгиплатьепотрясающее! яоченьдовольна။ всемсоветую။
အဆိုပါထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံ, ဖော်ပြချက်နှင့်သူ၏စျေးနှုန်းညှိ။ အရာအားလုံးမှန်ကန်သောဖြစ်ပါတယ်။
V ကို *** င
အဆိုပါပါးပျဉ်းကိုမှန်ကန်ပေမယ့်ပါးလွှာဝါဂွမ်း (ပိတ်ချော) ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်ဒယ်အိမ်မှာငါ့အပေါ်မှာ, တော်တော်ဣတ္လှပါတယ်။ ပျော်ရွှင် Model ။ ဒါပေမယ့်ထည်သင်တန်း၏, ပါးလွှာသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနေအိမ်တင်ဆောင်လာသောအစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတခုဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ပေးပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
H ကို ***, f
ငါစားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့အပ်ခဲ့သည် quich နှင့်အတူကျေနပ်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
: D *** ဌ
အဆိုပါစားဆင်ယင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းငါ့မိခင်အပေါ်ဒီတော့ကောင်းသောမကြည့်ခဲ့ပါ, နှစ်ဖက်စလုံးပေါ်ဤအကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုတကယ်ကောင်းစွာလုပ်ကြသည်မဟုတ်အမှားတစ်ခုခုလည်းမရှိနဲ့တူပါကကြည့်ရှုသည်။ ဒါပေမယ့်ထည်နှင့်အရောင်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
платьеОтличное! ШлоровномесяцвКазань။ Соответствуетописаниюполностью။ Размер XXL намой 50 размерподошёлидеально။ продавцуСпасибо!
Стиль Boho ။ 100% ချည်။ СделановКитае။ Кое-гдеизшвовторчатниточки။ Вцеломоченьдостойнодляжаркойпогоды / отпуска / дома။ Гладитсяиотпариваетсяхорошо, нотакжебыстромнется။ Нарост 168 иобъемгруди 110 заказан 4XL, намойвзглядвеликоват, можнобратьпоменьше။ Комфортно, норукипутаютсявткани, когдаищешькарманы။ Фотографиямнасайтесоответствует။ Продавецотработалотлично, трекотслеживался။ Какоказалось, встоимостьвходилабесплатнаядоставкадодома, нополучилисами။ Заказали 14 октября, получили 14 ноября - Россия, Пермь။
အဆိုပါစားဆင်ယင်စုံလင်သည်။ ငါကအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ nice ဒီဇိုင်း။ လှပသော